इच्छा तपाईकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्ताे छ १०० % काम गर्ने चाइनिज सुत्र - Daily Lokmandu
Homeसमाचारइच्छा तपाईकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्ताे छ १०० % काम गर्ने चाइनिज सुत्र
August 3, 2018 समाचार Comments Off on इच्छा तपाईकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्ताे छ १०० % काम गर्ने चाइनिज सुत्र
यसका लागि तपाईको श्रीमतिको उमेर वास्तविकमा आधारित हुनुपर्नेछ । उमेरमा तलमाथि परेमा तपाईको योजना विफल हुनेछ । तसर्थ, आफ्नो श्रीमतिको उमेर किटान गरेर मात्र छोरा या छोरी जन्माउने निधो गर्नोस् । पुर्बेलिको सहयोगमा
महिलाको चाहना पुरुषबाट, जान्नुहोस् महिलाले आफ्नो सेक्स पार्टनरबाट चाहने यी १० कुराहरु